Isixhobo sempompo esinokuntywila-Abavelisi bempompo baseTshayina abaphantsi, abaxhasi
I-KQSS / KQSW Uthotho lweMpompo yokuFunxa kabini
AY Series Centrifugal neeMpompo zeoyile
Isetyenziselwa ubunjineli bakamasipala, izakhiwo, ukukhutshwa kwemizi-mveliso kunye nonyango lwelindle ukukhupha ilindle, amanzi amdaka kunye namanzi emvula aqukethe izinto eziqinileyo kunye nemicu eqhubekayo.
Uluhlu lwe-WL lweempompo zelindle ezime nkqo zisetyenziswa ubukhulu becala kubunjineli boomasipala, kulwakhiwo lwezakhiwo, kwimfungumfungu yelindle kunye nonyango lwelindle. Zingasetyenziselwa ukukhupha amanzi amdaka, amanzi amdaka, amanzi emvula kunye nogutyulo lwedolophu oluqukethe amasuntswana aqinileyo kunye nemicu eyahlukeneyo eyahlukeneyo.
Impompo yogutyulo lwelindle ye-WQ / ES yokukhanya esetyenziswa ikakhulu kubunjineli boomasipala, kulwakhiwo, kumzi mveliso wokuhambisa amanzi amdaka kunye nonyango lwelindle ukukhupha ilindle, amanzi amdaka kunye namanzi emvula aqukethe izinto eziqinileyo kunye nemicu emifutshane.
Isetyenziswa ikakhulu kwiziko lokucoca ilindle, isikhululo sempompo sokuhambisa amanzi amdaka kamasipala, imisebenzi yamanzi, umjelo wokugcina amanzi kunye nokunkcenkceshela, iprojekthi yokuguqula amanzi, isikhululo sempompo esidibeneyo.
● Ubunjineli bukaMasipala
● Ukwakha izakhiwo
● ilindle lndustrial
● Amathuba okucocwa kwelindle ukukhupha ilindle
● Amanzi okulahla kunye namanzi emvula aqukethe iziqina kunye nemicu emifutshane